အင်ကြင်း သို့ ရွှေ့ထားပါတယ် ...
သူငယ်ချင်းများ .. အင်ကြင်း ကို လိုက်ခဲ့ပေးပါ ..
ReadMoe “ ”
Posted by Kaung Khant at 26.9.120comments Links to this post
From: thurein <thurein.co.mm@gmail.com>
မှန်ရာကို ပြောရရင် ရေးချင်နေတာကတော့ တစ်ခြား အကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် အရင် ရေးထားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့က လတ်တလော ဆက်စပ်နေလို့ ဒီ အကြောင်းအရာကိုပဲ ဆက်ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်က စိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုမို့ လတ်တလောမှာလည်း ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြတာ ဆန်းတော့ မဆန်းပါဘူး .. နောက်ပြီး ဒီလို စာမျိုးတွေရေးရတာ တကယ်တော့လည်း သိပ်တော့ ခံတွင်းမတွေ့လှဘူး .. ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ကလိတတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာကို သာမန်လောက် ဖတ်ရှုနားလည် နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလောက်ရှိရင် ဒီ အကြောင်းအရာတွေက အင်တာနက်မှာ တောင်လိုပုံအောင် ရှာဖတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးတွေပါ .. လူတိုင်းလည်း ရေးနိုင်ကြတယ် .. ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေက မြန်မာလူမျိုးမလား .. အင်္ဂလိပ်ရေးထားတာကို ဘာသာပြန်နားလည်ရတာ ထက် မြန်မာလိုလေးရေးထားတာကို ဖတ်ရတာ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ စိတ်အစာပြေပြီး တကယ် တတ်သွားသလို ခံစားရတယ်မလား .. ဒါကြောင့်မို့ပဲ တတ်သိနားလည်သူတစ်ယောက်လို မခံယူပဲ မျှဝေချင်တဲ့ စိတ်သက်သက်နဲ့ သိထားတာလေးတွေ ပြန်ပြီး ဝေဌပါတယ်။ စကြရအောင် ..
Windows တွေအတွက် Backup လုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ထွက်လာတဲ့ Software တွေဆိုတာ အင်တာနက်မှာ တောင်လိုပုံနေအောင် များပါတယ်။ ( နဲနဲ အတိဿရ လိုက်တာပါ .. အဲလောက်တော့လည်း မများဘူးပေါ့ ) ဟိုအရင် ရှေ့မှာရေးခဲ့ပြီးသလို Backup ဆိုတာကို Windows မှာပါတဲ့ Functions ကနေ လုပ်လို့ ရသလို Freeware တစ်ခုခု သို့မဟုတ် Paid Product သုံးပြီးလည်း လုပ်ပြီးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ် .. အားသန်ရာ သန်ရာပေါ့ .. မနက် နေ့ က စာမှာ Windows XP Backup အကြောင်း သိပ်အပြည့်အစုံကြီး မဟုတ်ပေမယ့် အခြေခံအဆင့်လောက် ပြောထားခဲ့ပြီးပြီ မို့လို့ ခု ဆက်ပြီး Windows7Backup အကြောင်းလေး ဆက်ချင်ပါတယ်။
Windows7Backup ကို ဘယ်လို စတင်ကြမလဲ ??
ဟိုး အစကနေ စပြောရရင်တော့ Windows7Backup လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ဖို့ အတွက် Start ကို စနှိပ်ပြီး Search programs and files ဆိုတဲ့ နေရာမှာ " backup " ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်လိုက်ပါ။ အဲလို ရိုက်လိုက်တာနဲ့ Backup and Restore ဆိုတာပေါ်လာပြီး အဲတာကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ Backup and Restore box ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက Search Options ကို ပိတ်ထားတတ်ကြလို့ Backup လို့ရိုက်တဲ့ အချိန် ဘာမှ မပေါ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ကတော့ Task bar မှာ Right click ထောက်ပြီး Properties ကိုဝင် Start Menu > Customize ကို သွားပြီး အောက်မှာရှိတာတွေထဲက Search Programs and Control Panel ဆိုတာကိုရှာပါ ပြီးရင် အဲ့ဘေးက Check box ကို ကလစ်ပေါးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Ok > Apply > Ok ပေါ့။ ဒါဆိုရပါပြီ။ ဒါကတစ်နည်းပါ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ Desktop ညာဘက် အောက်ထောင့်နားက System Tray Icons မှာရှိနေတဲ့ အလံပုံလေးနဲ့ Action Center ကို တွေ့ရင် အဲကောင်ကို ကလစ်ပေးပြီး Open Action Center ကနေ Action Center ကို ဝင်ပါ။ အဲမှာ Maintenance ရဲ့ အောက်မှာ Setup Backup ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မတွေ့သေးရင်လည်း တစ်ယောက်ယောက်က Hide ခိုင်းထားလို့ပါ။ Maintenance ဘေးက Down arrow ကို နှိပ်ပြီး Turn on messages about Windows Backup ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုပုံပေါ်လာပါပြီ။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 793x589.
နောက်ထပ် နည်းတွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ် ထားပါတော့ အဲတာတွေလိုက်ပြောနေရင် လိုရင်း မရောက်ပဲ နေပါဦးမယ်။ အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပေါ်လာတဲ့ Set up backup ဆိုတာကို နှိပ်လျှင်နှိပ်ချင်း Progress Bar တစ်ခု ပေါ်လာပြီး များမကြာခင်မှာပဲ Set up Backup Windows လည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက် ကိုယ့် Backup Files တွေ သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့ Destination ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို Google Docs မှာ ကျွန်တော် ရေးထားတာလေး ရှိပါတယ် .. အချိန်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ ဒီနေရာကနေ သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် ပေးတဲ့ Link ကို သွားကြည့်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Backup Destination အဖြစ်ဘယ်နေရာကို ရွေးချယ်သင့်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်လောက်ပါပြီ။ DVD, USB Flash Drive, USB External Drive, ဒါမှမဟုတ် Network Location နှစ်သက်ရာ နေရာ တစ်ခုခုမှာ Backup လုပ်နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ USB External Drive ကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ့မယ်။ တစ်ခု မှတ်ထားဖို့က အဲ့ အဆင့်ရောက်မှ Backup လုပ်ဖို့ USB Device တစ်ခုခုကို ကွန်ပြူတာမှာ လာတပ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်ဘက်အောက်နားလေးက Refresh ကို နှိပ်ဖို့ပါ။ ဒါမှလည်း Backup လုပ်လို့ ရနိုင်သမျှ Destination အားလုံးကို တိတိကျကျ မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Backup လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ခြင်း
Destination တစ်ခုခု စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးလို့ Next ကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ တွေ့မြင်ရမယ့် အရာက Options ( ၂ ) ခုပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တောင်းခံမှုပါ။ What do you want to backup ? ရဲ့ အောက်မှာ ဒီ Options ၂ ခုကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
( ၁ ) Let Windows Choose ( recommended ) နဲ့
( ၂ ) Let me choose
Let Windows Choose ( recommended ) ကိုရွေးချယ်မယ် ဆိုရင် Libraries ရဲ့ အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ data files တွေ ၊ Desktop ပေါ်မှာ ရှိနေသမျှ အရာတွေ နောက်ပြီး Default Windows Folder တွေ အားလုံးကို Backup လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Scheduled ဆွဲပြီး Backup ပေးထားမယ် ဆိုရင်လည်း Backup လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချိန်တိုင်းမှာ ခု ပြောထားခဲ့သမျှ နေရာက ဖိုင်တွေ အားလုံး Backup လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ အမြဲ ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု မေးစရာ ရှိလာတာက Libraries ဆိုတာပါ။ Libraries ဆိုတာဘာလဲ ? Libraries ဆိုတာ Windows7ကျမှ အသစ်ပြောင်းထားတဲ့ အခေါ်အဝေါ် တစ်ခုပါ။ ပြောရရင် ဘာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီ မလဲဆို Windows XP မှာပါတဲ့ Windows Partition အောက်က Documents and Settings နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်ဆင်တူသလို နဲ့ Vista မှာပါတဲ့ Windows Partition အောက်က Users နဲ့ လည်း သဘောတရားချင်း ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဆင်ဆင်တူပါတယ်ပဲ ပြောတာပါ အကုန်တော့ မတူပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Windows7မှာပါတဲ့ Libraries ဆိုတာက Windows XP နဲ့ Vista မှာပါတဲ့ အရာထက် ပိုပြီး ကိုင်တွယ်ရ လွယ်ကူအောင် စီစဉ်ပေးထားလို့ပါ။ Libraries အကြောင်းကို ဒီလောက်နဲ့ ပဲ ရပ်ထားလိုက်ဦးမယ်။ ပြောမှာက Backup အကြောင်း။
အဲဒီတော့ Let Windows Choose ( recommended ) ဆိုတာကို ရွေးချယ်လိုက်ရင် ကွန်ပြူတာက စက်တစ်လုံးကို Program ရေးပြီး ခိုင်းလိုက်သလိုမျိုး ဒါတွေဒါတွေလုပ် ဒါတွေဒါတွေ မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ ပုံစံကြီးနဲ့ပဲ သွားမှာပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုဒါတွေ ဖိုင်တွေ တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ သိမ်းထားမိပြီး အဲ့ဖိုင်တွေက Libraries အောက်မှာ ရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုရင် Backup လုပ်ငန်းစဉ်ထဲ ပါမသွားပဲ နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို မဖြစ်ရအောင် Let Windows Choose ( recommended ) ကို မရွေးချယ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ Let me choose ကို ရွေးချယ်သင့်မယ်လို့ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Let me choose ကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် Let Windows Choose ( recommended ) မှာ default အဖြစ် Backup လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရွေးချယ်လို့ ရသလို ၊ ကိုယ်ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး backup လုပ်ချင်တဲ့ တစ်ခြား ဖိုဒါတွေကိုလည်း ဒီနေရာမှာ ထပ်ဖြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။ ပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
ကိုယ် Backup လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုဒါတွေ ဖိုင်တွေကို ရွေးချယ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ နောက်အဆင့်ကိုသွားဖို့ Next ကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ မြင်ရမယ့် အနေအထားက အောက်က ပုံပါ။
အောက်နားက Save settings and run backup ဆိုတာကို မနှိပ်ခင် သူ့ အပေါ်နားက Change Schedule ကို နှိပ်ပြီး ဒီ Backup လုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နကြိမ် လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတာ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ ဒီအောက်က ပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ည ၇ နာရီ ကိုပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ စိတ်ကြိုက်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်ပြီး Save settings and run backup ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Backup စတင်လုပ်ဆောင်ပါပြီ။ ဒါဆို Windows7မှာ Backup လုပ်ဆောင်မှု ပြီးပါပြီ။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1082x688.
အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုဖြင့် Windows7တွင် Backup လုပ်ဆောင်ခြင်း
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ နည်းအပြင် တစ်ခြား တစ်နေရာကနေလည်း Backup လုပ်ဆောင်လို့ ရပါသေးတယ်။ Start > Control Panel > System and Security > Backup and Restore ကိုသွားပါ နောက်ပြီး ဘယ်ဘက်ခြမ်း အပေါ်ဘက်နားမှာ ရှိနေတဲ့ Createasystem image ကို click ပါ။ Where do you want to save the backup ? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ ( ၂ ) ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေရာ တစ်ခုကို ရွေးပါ။ တစ်ခုရှိတာပါ Same HD မှာ Backup လုပ်ရင် အဲ့ HD ကြွတာနဲ့ Backup files တွေလည်း ကြွသွားပါလိမ့်မယ်။ သတိတော့ထားပါ။ Same HD မဟုတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 794x589.
System Repair Disc ကိုလည်း လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .. သူကတော့ ခုနက နှိပ်ခဲ့တဲ့ Createasystem image အောက်မှာ ရှိတဲ့ Createasystem repair disc ကို နှိပ်ပြီး လုပ်ရမှာပါ။ သူ့ကို လုပ်ထားခြင်း အားဖြင့် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်လို့ ရမလဲ ဆိုရင် တကယ်လို့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ကွန်ပြူတာ Error တက်ပြီး ချွတ်ယွင်းချက်ရှိလာတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ Repair Disc ကို သုံးပြီး အရေးပေါ် Restore ပြန်လုပ်လို့ ရပါမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးဒေတာ အားလုံးကို Backup မဖြစ်မနေ လုပ်ထားကြဖို့ နက်နက်နဲနဲ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး မလား ??
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းအရာက Google Docs မှာ ကျွန်တော် ရေးထားပြီးသားပါ လင့် မပေးချင်လို့ ဒီမှာ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ တစ်ချို့က Links ပေးရင် ကလစ်ရတာ ပျင်းတယ် မလား ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားဖတ်လည်း ရပါတယ်။ အတူတူပါပဲ။
အရေးကြီးတယ် .. (အိုင်စတိုင်း)
ReadMoe “Step by Step Backup ပြုလုပ်ခြင်း”
Posted by Kaung Khant at 8.9.120comments Links to this post
From: thureinsoe <thurein.co.mm@gmail.com>
အခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာလူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ drupal နဲ့ website ရေးနည်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်သားများ အတွက်အခြေခံကြကြတင်ပြလိုက်ပါတယ်
Drupal ဆိုတာ php base free open source content management system အများကြီးထဲက တခုပါ။ Drupal ကို Dries Buytaert က "အမှာစကား သတင်းစာမျက်နှာ"( message page) အနေနဲ့ စတင်ရေးသားခဲ့ရာမှ ၂၀၀၁ ခုမှတော့ opensource project အနေနဲ့ စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Drupal ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒတ်ခ်ျ ဘာသာစကား "druppel" ဆိုတဲ့စကားကနေ ပြောင်းလဲယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ "a water droplet" "ရေစက်လေးတစ်စက်" အနေနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်ပါတယ်။ Drupal ကို စတင်ဖန်တီးသူ Buytaert အနေနဲ့ "dorp" ဒတ်ခ်ျဘာသာဖြင့် ရွာငယ်လေး (Dutch for "village") ဆိုပြီး အမည်နာမပေးချင်တာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် domain name ယူတဲ့ အခါမှာ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီမှုရှိပြီး အသံထွက်ပိုမိုအဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ drupal.org ဆိုပြီး domain name အမည်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Joomla and drupal ဟာ user point of view ကနေကြည့်သည်ဖြစ်စေ၊ developer point of view ကနေကြည့်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းအရာအတော်များများမှာကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် သုံးထားတဲ့ framework ကအစတူညီမှုမရှိပါဘူး။ Joomla က model–view–controller(MVC) framework ပေါ်မှာ အခြေခံထားပြီးတော့။ Drupal က presentation-abstraction-control(PAC) ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် MVC and PAC ဟာ တူညီသယောင်ရှိပေမယ့် အတွင်းက လုပ်ဆောင်ပုံတွေမှာတော့ ကွဲပြားမှုရှိနေပါတယ်။
Process of MVC
Process of PAC
အသုံးပြုရာတွင်လိုအပ်သော softwares (applications)များ
M = MySQL( database server)
P = PHP (server side scripting language)
တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ AMP software တွေကို တခုချင်းစီ တပ်ဆင်တဲ့နေရာမှ အခန့်မသင့်ရင်ဖြစ်စေ၊ configuration လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်စေ အခက်အခဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်၊
LINUX ( linux မှာ အများဖြင့် AMP ကိုတခုချင်းစီ install လုပ် အသုံးပြုကြပါတယ်။)
စတဲ့ AMP package တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။(အဓိကကတော့ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတော့လိုတာပေါ့နော်။ ) ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကတော့ XAMPP ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ XAMPP installation ကိုတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် install လုပ်ကြည့်ပါ။ အခက်အခဲ တစ်ခုခုရှိရင်mail ပို့ပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးသွားမှာပါ။
၁.၁။ ပုံမှာ Download Drupal 6.16 ကို နှိပ်ပြီး download လိုက်ပါ။ drupal-6.16.tar.gz ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ file တခုရလာပါလိမ့်မယ်။
၁.၂။ အဲဒီ file ကို winzip or RAR(recommended) သုံးပြီးဖြည်လိုက်ပါ။ drupal-6.16 ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ folder တခုရလာပါလိမ့်မယ်။ copy ကူးလိုက်ပါ။
၁.၃။ အဲဒိ folder ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AMP package အောက်ထဲမှာ သွားထားရပါမယ်။
( ဥပမာ - ကျွန်တော်ကတော့ XAMPP ကို D:\_ အောက်မှာ install လုပ်ထားတဲ့အတွက် D:\_xampp\_htdocs\_ directory အောက်ကို သွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က တခြား developing လုပ်နေတဲဟာတွေနဲ့ ရောမသွားအောင် cms ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ folder တခုထပ်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒိအတွက် အခုဆို D:\_xampp\_htdocs\_cms ဆိုတဲ့ directory အောက်မှာ drupal-6.16 ဆိုတဲ့ folder ကို နေရာချလိုက်ပါပြီ။ WAMP ဆိုရင်တော့ ~\_wamp\_www\_ အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း D:\_xampp\_htdocs\_ directory ကို ~ သင်္ကေတလေးအဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
၁.၄။ ပြီးရင် drupal-6.16 ဆိုတဲ့ folder ကို ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ နာမည်ပေးပြောင်းလိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် web site နာမည် ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်က တော့ "tharsoe.co.cc" ဆိုပြီး နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၂။ Database တည်ဆောက်ခြင်း
၂.၁။ နှစ်သက်ရာ browser ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ browser address bar မှာ http://localhost/phpmyadmin ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၂.၂။ create database ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ နှစ်သက်ရာ database name လေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် create ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပေးထားတဲ့ database name လေးနဲ့ database တခု တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
၂.၃။အဲဒီ database name လေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ တပ်ဆင်ခြင်း (installation)
၃.၁။ အပိုင်း ၂ မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ browser မှာ new tab တခုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ (http://localhost/phpmyadmin ဖွင့်ထားတဲ့ tab ကို ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ပါ။)
၃.၂။ http://localhost/cms/(အပိုင်း ၁.၃မှာ ပေးခဲ့တဲ့ folder name) လေးကို အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ tab မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေး အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃.၃။ Install Drupal in English ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေး အတိုင်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပုံကတော့ ~\_tharsoe\_site\_default\_ အောက်မှာရှိတဲ့ default.settings.php ဆိုတဲ့ file ကို settings.php လို့ အမည်မပြောင်းရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။( မှတ်ချက်။ ။settings.php file က အသုံးပြုမယ့် site နဲ့ ပက်သက်တဲ့ database name ၊ php configuration setting တွေအစရှိတဲ့ site နဲ့ ပက်သက်သမျှ setting တွေသိမ်းထားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။)
၃.၄။ default.settings.php ဆိုတဲ့ file ကို settings.php လို့ အမည်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် page refresh/reload ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
၃.၅။ database configuration page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အပိုင်း ၂.၃ မှာတုန်းက မှတ်လာခဲ့တဲ့ database name ကို Database Name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ထည့်ရပါမယ်။ Database username and password ကတော့ MySQL Database server ကို install လုပ်တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်နဲ့ password ဖြစ်ပါတယ်။ default username : root, password : <NULL> ။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ save and continue လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃.၆။ အခုဆိုရင် ဆိုက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ site name, admin account အတွက် user name and password တွေကို configure လုပ်ပါတော့မယ်။
- Site name ကတော့ logo လေးဘေးနားမှာပေါ်မယ် နာမည်နဲ့ title bar မှာ ပေါ်မယ့်နာမည်ကို ထည့်ပေးရမှာပါ။
- Site e-mail address ကတော့ ကိုယ်ဆိုက်မှာ လာပြီး registration လုပ်တဲ့သူရှိတဲ့အခါ၊ new password တောင်းတဲ့အခါ၊ စတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ site ရဲ့ admin ပိုင်းကမှာရှိတဲ့သူတွေဆီကနေ site ကပို့ပေးတဲ့အနေနဲ့ ပို့ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- User name ကတော့ admin login အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
- ဒီ E-mail address ကတော့ site admin သက်သက် အနေနဲ့ သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- password and confirm password ကတော့ admin login အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
- အောက်က server setting ပိုင်းမှာကတော့
+ default time zone ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်ထဲမှာ အချိန်နာရီလေးတွေပြချင်တဲ့ အခါရယ်၊ ကိုယ့်ဆိုက်က ဘယ်အချိန်တုန်းက စပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကို ပြချင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာအသုံးပြုဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။
+ clean url ကတော့ သာမန် ဆိုက်တွေမှာဆိုရင် ဥပမာ - index.php?id=1 စသည်ဖြင့် ပြတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ index/id/1 ဆိုပြီးတော့ SEO ( Search Engine Optimization ) အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (SEO ဆိုတာက google, yahoo စတဲ့ search engine တွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။)
- လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေထည့်ပေးပြီးပြီဆိုရင် save and continue လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၃.၇။ အခုဆိုရင် drupal ကို install လုပ်နေပါပြီ။
၃.၈။ အခုဆိုရင် drupal ကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
ပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ warning message က ကျွန်တော်ရဲ့ php.ini file ထဲမှာ mail အတွက် configuration ချိန်းထားလို့ ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ။
၃.၉။ your new site ဆိုတဲ့ လင့်လေးကို နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
phpmyadmin မှာ create လုပ်ခဲ့တဲ့ database ကို တချက်လောက်သွားပြန်ကြည့်လိုက်ပါ အခုဆိုရင် အဲဒီ database ထဲမှာ table စုစုပေါင်း ၄၇ ခု ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်း site အတွက်လိုအပ်တဲ့ modules တွေ ထည့်တိုင်းမှာ database ထဲကို ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ modules အလိုက် လိုအပ်တဲ့ table တွေပေါင်းထည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ သာမန် user တွေအနေနဲ့ ပြဿနာမရှိပါဘူး သိတယ်ဆိုရုံလောက်ပါပဲ။ developer တွေအနေနဲ့ နောက်ပိုင်း customize modules တွေ ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ database structure ကို သိဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ Default Admin page
ဒီအခန်းမှာ Drupal ကို တပ်ဆင်ပြီးသွားရင် တွေ့ရမယ့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲသူအတွက် default admin page(menu) အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
http://localhost/cms/thurein.org (thurein.org က ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။)ကို browser address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
username and password နေရာမှာ ၃.၆ မှာတုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ admin username and password ကို ထည့်ပြီး enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် admin home page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဆိုပြီး default menu4ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်း ကိုယ်install လုပ်တဲ့ modules တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ menu structure က ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။)
၄.၁။ My Account
ဒါကတော့ user တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ admin account ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် admin အကြောင်းကိုပဲ ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၄.၂။ Create Content
Create Content ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် default အနေနဲ့
Page and story ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Page content အပိုင်းကတော့ ကိုယ့်ဆိုက်ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ၊ ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာလေးတွေ၊ စတဲ့ comment ပေးစရာမလိုတဲ့ information လေးတွေကို ပြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Page content မှာ ရေးထားတဲ့ information တွေက ဆိုက်ရဲ့ home page မှာ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Page မှာ information တွေကို ပြသလိုပဲ ဒီနေရာမှာလဲ ပြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် story content မှာက user တွေအနေနဲ့ comments တွေပေးနိုင်မယ်၊ ဆိုက်ရဲ့ သတင်းတွေ၊ ကိုယ့်တင်ပြချင်တဲ့ information တွေကို Initial Home Page မှာ blog ပုံစံအနေနဲ့ ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဆိုက်ကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက်ပြုပြင်ဖန်တီး ပြီးလိုသလို ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာလဲ default menu ၆ ခုကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
ဖော်ပြပါပုံတွေထဲက fig: 4.3.1 ရဲ့ ပေါ်နားလေးမှာ By Task and By Module ဆိုပြီး menu tabs ၂ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
- By Task ဆိုတာကတော့ ဘယ်ဘက်ဘေးက administer menu အောက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ menus ၆ ခုထဲမှာရှိတဲ့ sub-menus တွေကို administer menu အောက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ menus ၆ ခုရဲ့ နာမည် အတိုင်း ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
- By Module ဆိုတာကတော့ ကိုယ် installation လုပ်ထားတဲ့ modules တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ menu တွေကို သက်ဆိုင်ရာ modules တွေအလိုက် ခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
- By Task
- By Module
၄.၃.၁။ Content Management
Content Management အပိုင်းမှာ default menu ၆ ခုရှိပါတယ်။
- RSS publishing
fig : 4.3.5
ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်ကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေက ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်၊ သို့ ကိုယ်ဆိုက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထားသွားတဲ့ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ မှတ်ချက်တွေကို ပြင်သင့်တာပြင် ဖျက်သင့်တာဖျက် ပြသင့်တာပြဖို့ အတွက် ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပိုစ့်တွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
content တွေကို အမျိုးအစားခွဲတာ တနည်းအားဖြင့် categorize လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ 4.2 Create content မှာတုန်းက Page and Story ဆိုပြီး default2ခုတွေ့ခဲ့ကြမှာပါ။ အခုဒီမှာကတော့ 4.2 မှာတုန်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Page and story ကို ပြင်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ ကိုယ်လိုတဲ့ အခြား content type တခုခုကို အသစ်ထပ်ထည့်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါစေ (ဥပမာ။ ။ ကျွန်တော်က IT products သတင်းနဲ့ ပက်သက်တာတွေကို သပ်သပ် တခုအနေနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်) ဒီနေရာမှာ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး initial page(home page) မှာ ပိုစ့်ဘယ်နှစ်ခုပြမှာလဲ၊ ပြတဲ့နေရာမှာလဲ ပိုစ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေချည်းးကိုပဲ ပြမှာလား။ စာကိုယ်တွေကိုရော ပြမှာလား၊ စာကိုယ်တွေကို ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ အကုန်လုံးအပြည့်ပြမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စာလုံးရေ အရေအတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ပြမှာ စသည်ဖြင့် ကိုယ်ပြချင်တဲ့ စာမျက်နှာ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တခြား သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆိုက်တွေမှာ ပိုစ့်အသစ်၊ သတင်း အသစ် ၊အကြောင်းအရာ အသစ်တခုခုတင်ပြီဆို ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်မှာ လာပြီးပြပေးစေချင်တဲ့ နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြပေးတဲ့အခါမှာလဲ ဥပမာ ပိုစ့်ဆိုလဲ ပိုစ့်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ပြစေချင်တာလား၊ စာကိုယ်ရော ပြချင်လား စသည်ဖြင့် ပြုပြင်ဖို့နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
tags ပုံစံပါပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စကားလုံး အစုဝေးလေးတွေကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ (သူ့ရဲ့ description မှာတော့ categorize အလုပ်ပါလုပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တော့ တခါဖူးမျှ မလုပ်ကြည့်ဖူးသေးဘူး။ tags ဆန်ဆန် စာလုံးဆွဲထုတ်တာလောက်ပဲ လုပ်ကြည့်ဖူးသေးတယ်။)
၄.၃.၂။ Site building
ဒီနေရာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်ကို ကိုယ်လိုသလို ပြုပြင်တည်ဆောက်တဲ့နေရာလေးပါ၊
ဆိုပြီး ၄ ခုရှိပါတယ်။
Blocks ဆိုတာက ကိုယ့်ဆိုက်ရဲ့ template ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက အားဖြင့် Header, Footer, Left, Right and Contents ဆိုပြီး Regional ၅ ပိုင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ အပိုင်းတွေက ကိုယ်ရွေးတဲ့ themes ပေါ်မူတည်ပြီး တခုနဲ့ တခု ပါဝင်တဲ့ Block region အရေအတွက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံမတူကြပါဘူး။
default themes မှာပါတဲ့ Block ဖွဲ့စည်းပုံပါ။
ပုံရဲ့ အလယ်မှာ Block, Region, Operation ဆိုပြိး column3ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Block ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ပြချင်တဲ့ Block တွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်(သို့) နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Region ဆိုတာကတော့ ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ Header, Footer, Left, Right and Contents တွေရဲ့ နေရာကိုရွှေ့ရအောင်လို့ ပေးထားတဲ့ dropdown list box ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာ အဲဒိ dropdown list box ထဲက Region တွေကိုရွေးပြီး ရွှေ့လို့ရသလို Block title ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အပေါ်၊အောက်၊ဘယ်၊ညာ မြားလေးပေါ်မှာ mouse ကို ဖိပြီး drag and drop သွားလို့လဲရပါတယ်။
Operation column မှာကတော့ user တွေကိုယ့်ဆိုက်ကိုလာတဲ့အခါမှာ ဒိ Block နေရာမှာ ခေါင်းစဉ် အနေနဲ့ ဘာပြမယ်။ ဒီ Block ကိုတော့ ဖြင့် ဘယ်လို့ role အဆင့်ရှိတဲ့ user တွေပဲ မြင်ခွင့် သုံးခွင့်ရှိမယ်အစရှိတဲ့ setting တွေအတွက် configuration ချတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Operation->configuration မှာ စုစုပေါင်း setting အမျိုးအစား ၄ ခုရှိပါတယ်။
- Block specific settings -> Block title ကို ကိုယ့်ပြချင်တဲ့ နာမည်နဲ့ပြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- User specific visibility settings -> ဆိုတာကတော့ registration လုပ်ပြီး အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ account setting ကိုလာတဲ့အခါမှာ ဒီ Block ကို ပေါ်ချင်လား မပေါ်ချင်ဘူးလား။ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ခွင့်ပေးနိုင်ဖို့ admin က သတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
- Role specific visibility settings ->ကတော့ ဘယ်အဆင့်ရှိတဲ့ user တွေကိုပဲ ဒီ Block contents တွေကိုပြမယ်။ ကျန်တဲ့ user role တွေကိုမပြရအောင် setting လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
- Page specific visibility settings -> ကတော့ ဘယ်လို page တွေကိုရောက်တဲ့ အခါမှာ ဒီ Block ကိုပြပြိး ဘယ်လို page တွေရောက်တဲ့အခါမှာ မပြဘူး ဆိုတာမျိုးပါ။( ဥပမာ - အသုံးပြုသူတစ်ယောက် ဒိဆိုက်ကိုလာတယ် အဲဒီအတွက် News ဆိုတဲ့ Block က သူဘယ် page ကိုသွားသွား အမြဲတမ်း ပေါ်နေမှာဖြစ်ပေမယ့် News listed page ကို ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒိ News ဆိုတဲ့ Block ဟာ ပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပြိး အခြား Block တခု သို့ ဘာမှမပေါ်တော့တာမျိုးဖြစ်အောင် setting ချတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အခု site building->menus and site building->modules အပိုင်းကို ကျော်ပြီး site building->themes အပိုင်းကို အရင်သွားလိုက်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ site building->menus အပိုင်းကနေစပြီး နောက်ဘက်က အပိုင်းတွေကို တခုချင်းစီ မရှင်းတော့ပဲ ဆိုက်လေးတခု လုပ်ကြည့်ရင်း ရှင်းသွားမယ်စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါတွေက တခုချင်းစီရှင်းနေရင် ရှင်းပြရတဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် လည်ထွက်သွားတယ်။(အမှန်က အပျင်းကြီးတာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမကျရင် မကျဘူး ပြောတာမဟုတ်ဘူး။) နောက်ပြီး အဲဒီအပိုင်းတွေက ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဆိုက်ရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားတာဆိုတော့ တခုချင်းစီလိုက်ရှင်းနေရင် အဆင်မပြေလောက်ဘူး။
အဲ့သည်တော့ ကျွန်တော်ဆိုက်လေးက ဘယ်လိုဆိုက်မျိုးလေး ဖန်တီးမယ်ဆိုတာအရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်း၊ software၊ နည်းပညာ အချက်အလက်အတွေ၊ တခြား ကျွန်တော်တင်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ စုံစီနဖာ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကွိစိကွစိ ပေါင်းပန်းလေးဆယ် အရောအနှော အင်း စိတ်ကူးတည့်ရာ အကြောင်းအရာတွေ အကုန်တင်မယ် လို့ပြောချင်တာပါ။ အဲဒီ စိတ်ကူးနဲ့တင်ပဲ site building->themes ကိုသွားပြီး ကြည့်လိုက်တော့
ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပုံစံတခုမှ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် themes လေးရဖို့ google မှာ drupal6themes free download ဆိုပြီးရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်။
- အဲလိုလျှောက်ရှာရင်း ဒီဟာလေးသွားတွေ့လိုက်တယ်။
- အဲဒီ themes ရဲ့ version ကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ 6.x-1.5 တဲ့ ဆိုလိုတာက version 6.15 အတွက် ထုတ်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ version က 6.19 ဆိုတော့ ရလောက်မယ်ထင်လို့ ဒေါင်းလိုက်တယ်။
- ရလာတဲ့ .tar.gz file ကို winrar သုံးပြီးဖြည်လိုက်ပါတယ်။
- ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဆိုက်လေးကို ကျွန်တော်စက်မှာသိမ်းထားတဲ့ နေရာ ~\_tharsoe-info\_sites\_all\_themes ဆိုတဲ့ အောက်မှာသွားထည့်လိုက်ပါတယ်။ (~\_tharsoe-info\_sites\_all\_ အောက်မှာ themes folder မဆောက်ရသေးဘူးဆိုရင် မိမိဖာသာဆောက်လိုက်ပါ။ ဒါမှ ကိုယ်က အသစ်ထည့်ထားတဲ့ theme က ဘယ်ဟာလဲ အရင် default ပါတာက ဘယ်ဟာလဲ သိမှာပါ။)
- အခု site building->themes ကို သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- ပြီးတော့ Enabled အမှန်လေးခြစ် default တစ်ချက်နှိပ် ပေးပြီးသွားပြီးပြီသွားလို့ အောက်နားက save and configuration ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အခုလိုလေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် theme က ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရပါပြီ။ ကျန်တဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အသေးစိတ် အပိုင်းလေးတွေကို နောက်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြင်ယူပ့ါမယ်။
Installation of the drupal modules
drupal modules installation ပိုင်းက အရင်မပြောခင် drupal မှာသုံးနေတဲ့ module ဖွဲ့စည်းပုံကို အရင် ပြောချင်တယ်။ သူက joomla လို modules တွေက တခုနဲ့ တစ်ခု လုံးဝတစ်သီးတစ်ခြားစီဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်သီးတစ်ခြားစီ ဖြစ်နေတာလဲ ရှိသလို တခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ modules တွေလဲ ရှိတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်သီးတစ်ခြားစီရှိတဲ့ module တွေက အတော်နည်းပြီးတော့ တခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေတဲ့ modules တွေက တော်တော်များတယ်။ ဆိုတော့ drupal ရဲ့ modules ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံက နဲနဲရှုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ကြီးရှုပ်ရှုပ်ပါ နောက်တော့ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အခု admin menu module ကို ဘယ်လို install လုပ်လဲ ဆိုတာပြောပါ့မယ်။ ပြီးရင် module တခုနဲ့တစ်ခု ကြားကဆက်သွယ်မှုကို သိအောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတာရယ်။ အဲဒီလို ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ module တခုကို install လုပ်ကြည့်ပါမယ်။
- http://drupal.org/project/admin_menu အဲဒီက ကိုယ် သုံးနေတဲ့ drupal version နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး admin menu module version ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
- tar.gz file လေးရလာပါလိမ့်မယ်။ ဖြည်လိုက်ပါ။
- ဖြည်ထားတဲ့ folder လေးကို copy ကူးလာလိုက်ပါ။
- ~\_tharsoe-info\_sites\_all\_ ရဲ့အောက်မှာ modules ဆိုပြီး folder တစ်ခု ဆောက်လိုက်ပါ။
- အခုနက copy ကူးလာတဲ့ admin menu folder လေးကို ဘာနာမည်မှ မပြောင်းပဲ ~\_tharsoe-info\_sites\_all\_modules folder အောက်မှာ နေရာချလိုက်ပါ။
- ပြီးရင် site building->modules ကို သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုလေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
- ပုံမှာ ပြထားသလို အကွက်လေးထဲမှာ အမှန်ခြစ်လေး ခြစ်လိုက်ပါ။
- ပြီးရင် save and configuration ကို သွား နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဲလိုလေး တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ အခုက ကျွန်တော်က admin logged in လုပ်ထားလို့ အဲလိုတွေ့ရတာ ဖြစ်ပြီးတော့ မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ဒီလိုလေး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ core modules option ထဲက Taxonomy, Comment and Forum modules တွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုပါ။
Forum module ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင် Taxonomy and Comment modules ၂ ခုကို ဖွင့်ပေးထားရပါမယ်။ အဲဒီအတွက် Forum modules ကိုသုံးဖို့ဆိုရင် Taxonomy and Comment modules တွေကို လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို Depends on: Taxonomy (enabled), Comment (enabled) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးနဲ့ ပြထားပြီးတော့။ Taxonomy module မှာဆိုရင် Taxonomy modules ကို Forum က ခေါ်သုံးနိုင်ကြောင်းကို Required by: Forum (disabled) စာကြောင်းနဲ့ ပြထားပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ Comment module မှာဆိုရင် Comment module ကို Forum and Tracker modules တွေက ခေါ်ပြီး သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း Required by: Forum (disabled), Tracker (disabled) ဆိုပြီးပြထားပါတယ်။
Forum module ကို ကျွန်တော်တို့ အမှန်ခြစ်လေး ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် Taxonomy and Comment modules တွေမှာရှိတဲ့ Forum (disabled) စာကြောင်းလေးဟာ Required by: Forum (enabled) ဆိုပြီး ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် Depends on ဆိုတာကတော့ မှီခို (သို့) ခေါ်သုံး (သို့) သားသမီး module လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ Required by ဆိုတာကတော့ အမှီခိုခံရတဲ့ (သို့)ခေါ်သုံးခံရတဲ့ (သို့) မိဘ module လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
အဲဒီအတွက် drupal မှာ module တခုဟာ အခြား တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ modules တွေကို ခေါ်ပြီး သုံးထားတာ ရှိသလို။ module တခုဟာ အခြား တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ modules တွေက ခေါ်ပြီး အသုံးချခံထားတာလဲ ရှိပါတယ်။ အဲလိုပဲ တခြား ဘယ် modules နဲ့မှ ဆက်စပ်မှု မရှိပဲ တစ်သီးတစ်ခြား ရပ်တည်နေတာလဲ ရှိပါတယ်။
ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် အဲဒီပုံမှာဆိုရင် ကျွန်တော် WYSIWYG API and Views modules တွေ ထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
WYSIWYG ကတော့ အပေါ်က admin menu လိုပဲ ဘာနဲ့ မှ ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။
Views ကတော့ သူ အတွင်းထဲမှာကိုပဲ ၃ ခုရှိပါတယ် အပေါ်ဆုံးက တခုကို မဖွင့်ပေးထားဘူးဆိုရင် အောက်က ၂ ခုကို သုံးလို့မရပါဘူး။ သူကတော့ တခြား module တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိပေမယ့်လုိ့ သူအတွင်းထဲက child modules and parent module တွေအချင်းချင်း ဆက်စပ်မှုရှိနေပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် ဆိုက်လေးမှာ လာတဲ့သူတွေကို သာမန်ဆိုက်တွေက user registration and log in ပုံစံအစား pop-up လေးနဲ့ ပြချင်လို့ ထည့်မယ့် module ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဆိုရင် Depends on: Ajax (missing), Ajax_thickbox (missing) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို တွေ့မှာပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီ module ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Ajax and Ajax_thickbox modules ၂ ခုထပ်လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် google မှာ drupal Ajax module ရယ် drupal Ajax_thickbox module ရယ် ဆိုပြီး သွားရှာပြီးထပ်ထည့်ပေးမှ ajax log in and registration ဆိုတဲ့ module က အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ 18 modules တွေရယ် အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ Ajax log in and registration လေးတွေကို installation လုပ်နေပါပြီ။
ReadMoe “drupal နဲ့ web siteတစ်ခုတည်ဆောက်နည်း”